भाईरल भएकी नायिका आशिका भन्छिन् खसिनी भन्दा आपत्ति किन ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
भाईरल भएकी नायिका आशिका भन्छिन् खसिनी भन्दा आपत्ति किन ?
फिल्मी दुनियाँमा आउँनु अघि हलिउड नायिका एञ्जिलिना जोली जस्तै भनी चर्चामा उनले आर्यन सिग्देलसंग सुश्री नामक फिल्मबाट डेब्यु गरिन् । फिल्म सुपरफ्लप भयो भने उनलाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै भयो किनकी त्यसपछि उनलाई न त चर्चा मिल्यो न त फिल्मको अफर नै । तर पछिल्लो समय उनको एक भिडियो ट्रोल हुँदै सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएपछि उनी रातारात चर्चामा आएकीछिन् ।
उनले दशैको बेला मासु नखान आग्रह गर्दे पोस्ट गरेको भिडियोको सन्देश राम्रो थियो तर उनले बोल्न नजान्दा हत्या नगरिकन मासु खान र खसिनी भनेपछि उनको खिल्ली उड्नु सम्म उड्यो । कतिले उनलाई पब्लिसिटी स्टण्ड पनि तर उनले आफनो सन्देश पब्लिसिटीका लागि नभई सकरात्मक सन्देशको लागि भएको बताएकीछिन् ।
जर्मनीमा बस्दै आएकी उनी आफै पनि मांसहारी हुन तर उनले किन यस्तो भिडियो किन बनाईन् उनी भन्छिन् ‘म सानै हुँदा आमा बित्नुभयो । त्यसपछि बुवाले अर्की आमा बिहे गर्नुभयो । उहाँले नै मलाई हुर्काउनुभएको हो । सानो छँदा मैले एउटा कुखुरा पालेकी थिएँ । यो कुखुरा मेरो साथी जस्तै थियो । सधैँ मलाई पछ्याउँथ्यो । स्कुल जाँदासमेत म यसलाई आफ्नो फ्रकभित्र लुकाएर लैजान्थेँ ।
तर, एउटा दशैंमा अर्की आमाले मलाई नसोधि यो कुखुरा काटिदिनुभएछ । मलाई अति नराम्रो लाग्यो धेरै दिन रोएँ पनि । आफ्नो मिल्ने साथी गुमाएको महसुस भयो । अहिले जर्मनीमा छु । केही दिनअगाडि मेरो गाउँकी साथीले फोन गरिन् । दशैंको विषयमा कुराकानी भयो । यही सन्दर्भमा उनले मेरो त्यो कुखुरा काटिएको कुरा झिकिन् । मलाई पुरानो घाउ कोट्याए झैं भयो । मेरो आँखाबाट अनायाश आँशु झर्‍यो ।
त्यसपछि नै मैले दशैंमा पशुवध गर्नेहरुका लागि सन्देशमुलक भिडियो बनाएकी हुँ । भिडियो खिच्दा म साह्रै भावुक भइरहेकी थिएँ । त्यही बच्चाबेलाको साथी कुखुरा मेरो दिमागमा खेलिरहेको थियो । आँखाबाट आँशु आउन थाल्यो । आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ । अहिले कतिपयले मैले प्याज काटेर नक्कली आँशु झारेको आरोप लगाउँदा साह्रै चित्त दुखेको छ ।’ ।
आफुलाई नौटंकीको संज्ञा दिएपछि उनले यस भने चित्त दुखाएकीछिन् । हत्या नगरीकन मासु खानुस र खसिनी भन्दा उनी बिषेश हाँसोको पात्र बनेकी थिईन् । उनी भन्छिन् ‘हामी सानोमा साथीहरुसँग विभिन्न घरपालुवा जनावरहरुको अभिनय गरेर खेल्थ्यौैं । कोही कुखुरा कुखुरिनी बन्थ्यौं, कोही बाख्री बाख्रिनी, कोही खसी-खसिनी बन्थ्यौं । त्यो बेला नै प्रयोग गरेको खसिनी शब्दले मेरो जिभ्रोमा बसेको रहेछ । यही शब्दलाई लिएर मेरो खेदो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
डाक्टरको स्त्रीलिंगी डाक्टरनी, मन्त्रीको मन्त्रिनी भनेजस्तै खसीको स्त्रीलिंगी खसिनी भन्दा किन आपत्ति ?’ । यो काण्डले उनलाई अरु त त्यस्तै हो सामाजिक सञ्जालमा एक लाखभन्दा बढी फलोअर्स थपिएका छन् । तर उनलाई यसमा कत्ति खुसी छैन । यो काण्ड पछि उनी शाकाहारी बन्ने तयारीमा छिन् भने फिल्मी क्षेत्रमा फर्कीने भने उनको कुनै सुर छैन ।